ICaribbean Stud elihle kakhulu Real Real Casinos Online - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » ICaribbean Stud
Lapho udlala iCaribbean Stud ngemali yangempela
Yini iCaribbean Stud?
Imithetho Eyisisekelo yeCaribbean Stud
Isu Eliyisisekelo LeCaribbean Stud
Umlando weCaribbean Stud
Dlala iCaribbean Stud
Ukudlala istudiyo seCaribbean ngemali yangempela akudingeki ukuthi kube yisiphakamiso esiyingozi. Abadlali abalandela imithetho embalwa elula bazoba nokuhlangenwe nakho okujabulisayo nokunenzuzo. Ungalokothi uhlanganise ukugembula notshwala. Abadlali abagodlela ukuphuza kwabo ngemuva komdlalo bazokwazi ukuhlala begxile odabeni olusondele.
Abadlali abazibekela isabelomali esiqinile abangakwazi ukusilahla bazoba nokuhlangenwe nakho okujabulisa kakhulu futhi okungeyona eyingozi. Ekugcineni, abadlali abazibekela umgomo ngaphambili abazokhipha kuwo imali bazoshiya umdlalo uphumelele futhi bakwazi ukuwuthokozela.
Kuyavunywa, iCaribbean Stud Poker ngumdlalo othokozisayo ogcina abantu bebuya ngokuningi. Kubonakala ngemithetho eqondile kanye nokubi okumangazayo. Ngokungafani neminye imidlalo yekhasino, awudingi ulwazi oluningi ukuze uqalise. Futhi kuba ngcono; manje usungadlala i-Live Caribbean Stud ngqo ekhaya!
Akungabazeki ukuthi i-croupier yomuntu kuphela engenza umdlalo wamahhala futhi ongenzeleli weCaribbean Stud umdlalo. Ngaphandle kwalokho, le nguqulo iza nakho konke okutholakala ekhasino lezitini nenjini. Umthengisi obukhoma, indawo yangempela yamakhadi, futhi, nomsindo wangemuva we-ionic weseshini ebukhoma.
Okokuqala, wonke umuntu kufanele abheje ngokulingana kwama-ante ukuze athole isihlalo esibonakalayo emdlalweni. Ngakho-ke layisha i-bankroll yakho bese ushaya noma yini nge- “place bet” kuyo. Ngemuva kwalokho, umthengisi uxuba amakhadi bese unikeza wonke umuntu amakhadi amahlanu abhekane ngqo, ngesizathu esizwakalayo.
Ngalesi sikhathi, ungabona kuphela elinye lamakhadi omthengisi ngenkathi amanye ebheke phansi. Wonke umuntu uthola ithuba lokushayela noma ukusonga ukubheja kwakhe. Kwirekhodi, ukusonga kusho ukulahlekelwa yi-ante yakho ngenkathi ushaya kufaka ukubheja okungeziwe ukukukhulisa. Isandla esiphakeme kakhulu siyanqoba futhi sikhokhwa ngqo.
Nawa amanye amasu ayisisekelo:
Njalo phakamisa amabhangqa – ukusonga ngazimbili (kungakhathalekile inani lazo), kungahle kuzisole
Ungalokothi uphakamise isandla esibuthakathaka – enye into ngaphandle kwe-Ace, King, Royal Flush, Straight Flush, ezine ezinomusa, iNdlu egcwele, ezintathu zohlobo, amabhangqa amabili noma ikhadi eliphakeme
Uma usuyazazi, nakhu okunye:
Phakamisa njalo uma ikhadi lomthengisi liyi-2 ngokusebenzisa indlovukazi futhi lifana nelinye lakho
Khetha ukukhulisa uma ikhadi lomthengisi liyi-Ace noma iNkosi futhi uneNdlovukazi noma uJack
Phakamisa uma ikhadi lomthengisi liphansi kunekhadi lakho lesine eliphakeme kakhulu
Umsuka walo mdlalo udaba oluphikisanayo. Amakhulu abantu athi bawutholile lo mdlalo, kepha kunento eyodwa eqinisekile: wawudlalwa ngokuhweba okokuqala e-Aruba, isiQhingi esiseCaribbean. Lapha, abantu abahamba ngemikhumbi nasemahhotela banikele ekukhuleni kwayo.
Zonke lezi zinto zenzeka ngeminyaka yama-1980s kodwa kwaze kwaba ngawo-1990 lapho umdlalo wenza khona waya e-US nase-Europe bese kuba ngumhlaba wonke. Ngenxa yesimo sayo esithandekayo, yathatha umhlaba ngesiphepho futhi yaba yindawo edume kakhulu endaweni yokugembula.
Uma unendawo ethambile yokuhlukahluka kwe-poker, iCaribbean Stud kungaba yilokho okudingayo ukunonga isipiliyoni sakho sokugembula. Imithetho yayo ihlala ingaguquguquki online naku-inthanethi. Kepha njengenjwayelo, cela injini yakho yokusesha oyithandayo ukuthola izibuyekezo ngaphambi kokusayina ulayini onamachashazi.
Uma umusha ngokuphelele kulo mdlalo, funa ikhasino engafakwa idiphozi. Banikeza ithuba elingenangozi lokukusiza uqonde imithetho eyisisekelo futhi uvivinye namasu amasha. Yebo, lokho kuhle kakhulu konke odinga ukukwazi ngaphambi kokuqala nge-Caribbean stud. Ukudlala okuhle!